Ankara Nnyocha Ahịa Ankara Na Anọ Metropolitan | RayHaber | raillynews
[12 / 02 / 2020] Ememe Karaköy Tunel 145, ncheta nke 106 nke Nostalgic Tram	34 Istanbul
[12 / 02 / 2020] Zọ Railway Fair iji mee ka Eskişehir sie ike	26 Eskisehir
[12 / 02 / 2020] Mayor Yavaş na-achọ otuto maka Mamak Metro Project	06 Ankara
[12 / 02 / 2020] Mayor Yüce nọ na Bursa maka Sakarya Tram Project	54 Sakarya
[12 / 02 / 2020] AYM jụrụ ngwa Kanal Istanbul nke CHP	34 Istanbul
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraA Haziri Nnyocha Nnọkọrịta Nnukwu Ankara Obodo
21 / 01 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
ankara buyuksehir na-ahazi nyocha tagzi azụmahịa
Ankara Obodo Ankara, nke bu n’obi ịnye ọrụ ụgbọ njem dị mma na nke dị mma na isi obodo, na-ahazi “Azụmaahịa Taxi” iji dozie nsogbu ndị ọkwọ ụgbọ ala na iji nweta echiche ha na ntụziaka ahụ akwadoro.
Ndi isi obodo ukwu, puku ndi ahia tagzi 7 701 zigara ndi SMS ozi n’ekwentị ha ma gwa ha ka ha sonye na nyocha a. N’ajụjụ ajuju mejupụtara ajụjụ 9; Enwere isi okwu metụtara nchekwa nke ndụ na ihe nchekwa nke ndị njem yana ndị ọkwọ ụgbọ ala, na-ahụ na arụ ọrụ ahụ n'ụkpụrụ ụfọdụ, yana iguzosi ike n'ezi ihe nke nchekwa okporo ụzọ n'obodo. N’akụkụ ikpeazụ nke nnyocha ahụ, a na-arịọkwa ndị na-anya tagzi ka ha kwuo echiche ha na aro ha banyere ntuziaka na ihe ndị ọzọ.
Na nyocha ahụ, a na-anata echiche nke ndị azụmaahịa gbasara ikike na ọrụ dịịrị ndị na-eji akwụkwọ taksi na ndị ọkwọ ụgbọala, atụmatụ nke tagzi, njikọta nke ngwa teknụzụ n'ime ụgbọ ndị ahụ.
Ọgwụgwụ nke njem njem ejidere na obodo
Na Ankara, ebe enwere ndị taxis kachasị ọnụ ọgụgụ site na ndị bi na ya, a ga-akwụsị ụgbọ ala ndị na-adịghị mma iji hụ na usoro nke okporo ụzọ yana iji meziwanye ihe oyiyi nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, site na ịtụ iwu nke na-agaghị etinye onye ọ bụla ibu ahịa ọfụma Mansur Yavas.
Fatih Eryılmaz, Isi Ngalaba Transportgbọ njem nke Obodo ukwu Fatih Eryilmaz, onye rụtụrụ aka na ihe omume ndị metụtara enweghị mmasị na ndị na-achịkwaghị achịkwa, bụ ndị nwere nkwarụ, mebiri aha ọma nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, tupu nwa amaala ahụ.
Anyị kwadebere iwu ga-eme ka afọ ju ndị niile bịara. Anyị chọpụtara na Ankara kwesịrị ịgbaso ọnọdụ mpaghara. Ebumnuche anyị bụ inweta echiche nke ụmụ amaala na ndị ọkwọ ụgbọ ala. Enweela ọtụtụ ihe omume ndị na-eyi ọha egwu na Ankara n'oge gara aga. Ekpebisiri ike n'ihi nsonaazụ nyocha ndị a ji ndị tagis. Ọ dị mkpa iji kpachara anya. Ebumnuche nke ntuziaka ahụ bụ iweghachite onyinyo nke ndị ọkwọ ụgbọ ala tagzi anyị na-achọ imebi ma nyere ndị anyị aka iji ụgbọ ala ndị a n'enweghị nsogbu. Ebe ọ bụ na edebeghị aha ndị tagis ruo taa, ọgba aghara na-achịkwa okwu a. Nhazi ga-eritekwa uru maka ndị ọkwọ ụgbọala taxi anyị. Enwere ọtụtụ okirikiri nke Mịnịstrị nke ime. A na-etinye usoro elektrọnikwu ndị a na ntụzịaka anyị maka nchekwa nke obodo na usoro nke ndị tagis. Uru ọzọ dị na ndokwa anyị bụ ichedo ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị megidere usoro ụgbọ ala Uber. Ebe obu na enweghi oganihu n’usoro nke nkasi obi na takasi, ndi obodo anyi achoputala ndi ozo tagzi. N'ebe a, anyị chọrọ ka echekwa ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị taa ma echi, anyị ga-ahụ nke a. Dịka obodo, anyị kwesịrị imere ha nke teknụzụ. Uber ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ kwesịrị ịbanye ebe a ma ghara iji achịcha onye ọ bụla egwuri egwu. Isnye na-arụ ọrụ na tagzi dị mkpa maka ụmụ amaala anyị? O nwere iru ntozu di nkpa o choro ya na onodu a choro ibu onye oru tagzi? Anyị kwesịrị ịmata ha dị ka ụmụ amaala. ”
AKW TRKWỌ TAXI NA-EKWU N ’AB TRR BY TRAVELING
N'ikwu na ha na-enyekwa ndị ọkwọ ụgbọala tagzi na ụmụ amaala ozi ka ha nweta echiche ha, Eryılmaz kwuru:
“Ka ọ dị ugbu a, anyị ekwela nkwa na ndị ga - eburu ndị ọkwọ ụgbọ ala niile gbasara anyị, anyị na-anabatakwa ya. Anyị atụleela echiche iwu ikike nke ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọkwọ ụgbọ ala nke etolitere na Ankara ruo ugbu a, na tagzi guzoro na akara tagzi ka etolite dịka ọnọdụ anyị na anyị enyerela aka na ịnọ n'okpuru nchekwa iwu. Ha nwere ike bụrụ ndị chọrọ ime ka o nwe obi abụọ banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala anyị. Ka ha doo anya na ntuzi aka a, site na ntuzi aka nke onye isi ala anyi Mansur Yavas, odighi nsogbu nke gha ewetara ndi ozo anyi taxi kari. Ebumnuche anyị bụ inyere onye na-anya tagzi aka ịchebe ụkpụrụ ụfọdụ ma nyere ndị ọha aka ịkwaga na ntukwasi obi na obodo. Mgbe anyị na-akwado iwu a, anyị natara echiche nke ụlọ ọrụ gọọmentị niile. Anyị na-agwa ndị ọkwọ ụgbọala tagzi anyị site na iji ozi zi ha. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-anabata echiche nke ụmụ amaala anyị wee bulie ntuziaka anyị. ”
Ngosipụta ọmịiko: Nrịbaama na ike na-abụghị nke azụmahịa n’etiti Pamukova na Eskişehir ve
Ejiri 1 Na-akpata Ahụhụ na Ụgbọ okporo ígwè na-azụ ahịa na Eskişehir
DHMİ Fast Taxi na Mitụgharị Milas - Bodrum Airport Taxiway to Runway P
Mmezi taxi na taxi Dolmuş
Nkọwa nke Taxi si Antalya Ukwu
Obodo Samsun ga-anara ọmịiko maka tagzi
Mahadum Hakkari jidere Snow Trekking
Saklıkentte na-ahazi ememe Snow na Ememe Ọsọ
RAYHABER na RAILLYNEWS ga-aga Nleta Ihe Nleta nke 2012 maka Mbido…
Ogologo Centennial nke Bayburt na-ekwu okwu na Silk Railway
Beykoz Logistics Vocational School na ”M na-amụta site na ime” ngosi “Informatics…
TCDD na-ahazi njegharị gaa mba ndị dị na Balkan
Beykoz Logistics School School na-ahazi Conference Logistics na E-Ahịa
Karailük University Rail Systems Engineering Club 1. iltọ Rail Systems Karab
Bombardier Ụgbọ njem na-ahazi ụbọchị
imewe taxi guzo
akwụkwọ ikike tagzi
onye na-anya ụgbọ ala
Nnyocha xigwọ tagzi Azụmaahịa
Usoro ugbo ala Uber
Taa na akụkọ ihe mere eme: 13 February 1923 Nafia
Ememe Karaköy Tunel 145, ncheta nke 106 nke Nostalgic Tram
Zọ Railway Fair iji mee ka Eskişehir sie ike
Mayor Yavaş na-achọ otuto maka Mamak Metro Project
Mayor Yüce nọ na Bursa maka Sakarya Tram Project
Daalụ na nleta maka ndị ọrụ na - echekwa nkịta gị
AYM jụrụ ngwa Kanal Istanbul nke CHP
Nkụzi Ọdịdị Dị Elu Çerkezköy Nzukọ Ego Ntụgharị
Sivas YHT na Demirağ agaghị abụ ndị si OIZ kwabata, kama ọ ga-abụ mpaghara na-enweta mbata na ọpụpụ
TCDD 5th Regional Directorate duziri 87 Million Infrastructure Work
Ngosipụta ọmịiko: Ndị ọrụ ga-asacha na Marmaray Stations
Nkwupụta Okike na ọmịiko: B60 mkpuchi ụra dị ka UIC 70 Rail ga-azụta
Anma ọkwa Onye Mgbapụta: Mweghachi nke Ọrụ Ndị Ọrụ maka TCDD 1st Regional Directorate Social Facilities
Nkwupụta Okike: TCDD 1st Mpaghara Directorate Social Ihe Onwe Onye Ọrụ Ndị Ọrụ
Rize Artvin Airport Superstructure Ihe akụrụngwa Ihe owuwu ikike
TCDD ebipụtala ndepụta nke ndị tozuru iji nyochaa Inyocha Nyocha
Iwu ndị uwe ojii nwere ike ịzụta onye ọka iwu
Asọmpi Udiri Udiri Agba Siga Kaadị nke Uludag
Ulo oru ulo obibi bu 2019 n’aho 53,5
Atatürk Park Sea Star Project ga-agbakwunye Prestige na Ordu
Nzukọ Mgbakọ mbụ nke BTSO 2020 nọrịrị
Ekpebiela ụgwọ nke ụgbọ ala ụlọ!
TÜVASAŞ Amalitere Iji Nwepụta Aluminium na -ebupụta Mba
Integrawined Training for EGO Drivers with Citizens
Isi idé nke Turkey si Railway Sector lọjistik Master Plan
Polestar Volvo S60 ọhụrụ
Sistemụ Audi Quattro dị afọ 40
New Hyundai i30 ga-ewebata na Geneva
A ga-egosipụta Bugatti Chiron R na Geneva